Amagumbi angatshatanga okanye amabini x 2, N6, Highgate (B)
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJayne
Kukho amagumbi amabini anomtsalane nakhululekileyo ecaleni komnye. Igumbi ngalinye liyafumaneka umntu omnye okanye kabini (iibhedi ziyi-4' kabini). Iindwendwe zinosetyenziso lwabucala lomgangatho ophantsi, kubandakanya igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi. Oku kukuvumela ukuba uphumle kwaye uzimele - nangona, kunjalo, ndingavuya ukunika naliphi na icebiso olifunayo.
Indlela izolile, izolile kwaye inemithi. Izithintelo zokupaka ziyi-10-12 kuphela i-M-F. Iimvume zokupaka iindwendwe ziyafumaneka ngexabiso eliqhelekileyo.
Igqibelele izibini, abahambi bebodwa okanye abahambi beshishini abadiniweyo badinwe ziihotele.
IHighgate yindawo ekhuselekileyo nenkulu enomxube onika umdla wezindlu zosapho kunye neeflethi, ezigcwele izakhiwo ezintle kunye neendawo eziluhlaza. Le ndlu kukuhamba okufutshane ukuya kumbindi weLali yaseHighgate, ineendawo ezininzi zokutyela ezinqabileyo nezingaqhelekanga, iigastropubs ezinomtsalane kunye neecafe, kunye nePond Square, indawo evulekileyo ethandekayo enemithi kunye neebhentshi. Indlu ngokwayo imelene neNdawo yamangcwaba eHighgate onokuthi uyindwendwele xa uzonwabisa, okanye ukonwabele ukhenketho olukhokelwayo ukutyelela abahlali abadumileyo abanjengoKarl Marx, uMichael Faraday noGeorge Eliot. I-Waterlow Park, i-26-acre "igadi yabangenagadi", (enye yeemfihlo ezigcinwe kakuhle zaseLondon), i-oasis ezolileyo enamachibi kunye nemibono yaseLondon, inenkqubo edibeneyo yeziganeko kwiindawo zaseLauderdale House.
Ngonxibelelwano oluhle kakhulu lwezothutho, kulula ukufikelela kuyo yonke into esembindini weLondon enokubonelela ukusuka apha. Kodwa ukuba ufuna ukubaleka kwisixeko esixakekileyo, i-Highgate Woods kunye nommandla omkhulu we-Hampstead Heath (eyona ndawo ivulekileyo yaseLondon, indawo yasemaphandleni yokwenyani embindini wesixeko) ikumgama wokuhamba ngokulula. Yonwabela ukuhamba okumangalisayo kweemayile ukunqumla umhlaba oshushu owaphefumlela igcisa uJohn Constable kunye nembongi uJohn Keats ngokufanayo, iimbono ezikwiNduli yePalamente, ukuqubha kwi-lido okanye kumachibi akhethekileyo avulekileyo e-Hampstead, okanye imbali etyebileyo kunye nengqokelela yobugcisa obudumileyo eKenwood House.
Zombini iWhittington kunye neRoyal Free Hospital zikufuphi.
My work has taken me to many countries around the world, and I love meeting people from different backgrounds. I am hosting AirBnB guests in my home in North London, helping them to get to know their way around locally, in London and around the UK.
My work has taken me to many countries around the world, and I love meeting people from different backgrounds. I am hosting AirBnB guests in my home in North London, helping them t…
Ndinikezela ngolwazi olubhaliweyo malunga nokuhamba, iziganeko zendawo ezinomdla kwaye ziya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo xa ifuneka.